Ii-permalinks ezinamandla kwi-WordPress > UVielhuber uDavid
Ii-permalinks ezinamandla kwi-WordPress07
Inkqubo ye-WordPress ye-permalink inokuhlengahlengiswa kakuhle kwiimfuno zakho ngoncedo lwee- tag . Ukuseta% igama lefayile% sesona sisombululo sixhaphakileyo nesisebenzayo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukumilisela amakhonkco anyanisekileyo okwenyani, kufuneka kuqala wandise inkqubo ngekhowudi yakho.
I- API enamandla ye-WordPress yokubhala kwakhona inikezela ngeendlela ezininzi zokuhlengahlengisa inkqubo kwiimfuno zakho. Ukuba ufuna inkululeko epheleleyo, ungaqwalasela i-WordPress ukuze naziphi na ii-URL (ezinalo naliphi na inani lamanqanaba) zinokwenzeka. Ngenxa yoko, umzekelo, umnxeba oya ku-
yenziwe. Oku kuthetha ukuba zonke ezinye iindlela zivulelekile ukwenza inkqubo ye-router yakho kunye nokuvelisa umxholo ohambelana noko. Ukufezekisa isimilo esifunekayo, sisebenzisa i "rewrite_tag" kunye ne "rewrite_rule" iintshukumo kwaye songeza le khowudi ilandelayo kwifayile yemisebenzi.php yomxholo osebenzayo:
Kunyanzelekile ke ukuba ugcine useto lwe-permalink kwakhona (Useto> Iipermalinks> Faka utshintsho okanye, kungenjalo, fowunela i- flush_rewrite_rules () isebenze kube kanye ) ukuze imigaqo emitsha isebenze. Okokugqibela, senza iphepha elitsha nge-permalink "phinda ubhale" kunye netemplate "iphepha elibhaliweyo", ekufuneka lenziwe kuqala kusetyenziswa le fayile ilandelayo:
Kuqwalaselo oluqhelekileyo, zonke ii-URL ziyafikeleleka. Isiseko sokwahluka kwesiseko sedola sinokuxhotyiswa nangayo nayiphi na iifowulda ezifakiweyo: Ixabiso "pop / up", umzekelo, lenza ukuba i-URL ifikeleleke
Zonke ezinye ii-URL azichaphazeleki- ezi zilungiswa ngeWordPress njengesiqhelo.